Sida laga soo xigtay falanqaynta, Kaadhka Apple waa uu soo saari karaa 1,5 bilyan oo doolar - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Sida laga soo xigtay falanqaynta, Kaadhka Apple wuxuu soo saari karaa balaayiin dollar ah 1,5
Saadaal wanaagsan oo loogu talagalay kaararka deynta ayaa tuntay Apple in ay ku qanciso iibsadaha.
Shirkadda Cupertino waxay dooneysaa inay mar kale ku dhowaad hal bilyan. Waxay ahayd markii uu shirkiisii ​​ugu dambeeyay ee Apple soo bandhigay kaararka bangiga: Kaarka Apple. Warqad lama filaan ah oo loogu talagalay alaab ka fog kuwa sida caadiga ah soo jeediyay by weyn ee Maraykanka. Hase yeeshe, shaki la'aanta ayaa laga yaabaa inay qabsadeen kuwii iibsaday, falanqeeyaha Nigel Fletcher, oo ah HSBC, ayaa eegaya indhah wanaagsan oo kaararka kumbuyuutarka ah. Sida laga soo xigtay ninkan, Kaadhka Apple wuxuu soo saari karaa balaayiin dollar oo ah 1,5 sano kadib. Bilaha ugu horeeya ee jiritaanka, kaadhka deynta waa inuu abuuraa wax aan ka yarayn 5 Milyan Dollar.
Apple wuxuu ku xisaabtami karaa iskaashi la leh Goldman Sachs
Tani waa xaalad kasta oo ah waxa Nigel Fletcher ee HSBC Bank ay aaminsan yihiin falanqaynteeda. Sida laga soo xigtay ninkan, Kaadhka Apple wuxuu ku soo saari doonaa 300 Milyan Dollar sanadka ugu horeeya ee jiritaanka ka hor inta uusan gaarin shanta sano ee XNUM ka dib shan sano. Ku filan in la yiraahdo, waa lacag aad u fiican shirkadda Cupertino oo ku xisaabtami karta iskaashigeeda Goldman Sachs oo kaliya oo ah guddoomiye 1,5%. Nigel Fletcher ayaa tilmaamay in kaadhka Apple-ka uu badanaaba iibsan doono dadka isticmaala US - wax ka yar 30% iibka.
Si kale haddii loo dhigo, waxay ku guuleysteen sharraxa Apple, haddii saadaaluhu caddeeyeen. Waa in la sheego in ogeysiiska kaadhka deynta ah lagu soo celin karo iyadoo loo eegayo dhibcaha isticmaalaha ayaa ahaa mid la yaab leh. Isla markaa la soo bandhigay adeega maqal-muuqaalka / videogame ee shirkadda Cupertino, Kaarka Apple-ga weligiis ma dhicin wax war ah.
Guud ahaan wicitaan Apple ah kuwaas oo hadda ku tirin kara alaabta cusub si loo kobciyo kala duwanaanshaheeda - laakiin gaar ahaan dammaanadda sanduuqyada.
HomePod si rasmi ah ayuu hoos ugu dhacay qiimaha, Apple dhibaato?
5G: Samsung ma awoodo inay bixiso jajab loogu talagalay Apple
Apple: shahaadada Powerbeats Pro, chip H1 iyo xariirka runta ah
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/dapres-les-analyses-lapple-card-pourrait-rapporter-15-milliards-de-dollars-311998
Apple wuxuu raadinayay qof uu ku qoro gabagabada Faransiiska ee Siri